လေနုအေး: တန်ခူးရဲ့ပေါချောင်ကောင်း စိတ်ပင်ပန်းမှုလျှော့ချနည်းများ
Posted by တန်ခူး at 10:36 PM
အစ်မ တစ်ချောင်းထိုးလေးတွေက ချစ်စရာလေး။
ကောင်းလိုက်တာ အစ်မရယ်.. ဖုန်းအိတ်လေးကြိုက်တယ်..အကျီက ပုလဲလုံးလေးထိုးထားတာလဲ ကြိုက်တယ်..။ ဒါမဲ့ တစ်ခုမှ မလုပ်တတ်ဘူး..။ :D
ကျနော်လဲ ထိုးရတော့မယ်...အမရေ... အခု သူက အညောင်းမိမယ်ဆိုပီး မထိုးခိုင်းလို့ရပ်ထားတာ... မနှစ်ကဆောင်းဆို ကျနော်ထိုးပေးတဲ့ ဥိးထုပ်ရယ် လည်စီးရယ်နဲ့ တနှစ်လုံးအဆင်ကိုပြေလို့ပဲ..အမရေ။ အဲလိုအလှဆင်တာ ရုပ်နဲ့မလိုက် အရမ်းဝါသနာပါတယ်..
ပန်းပင်လဲစိုက်လိုက်တာပဲ..သူ့အကျီလေးတွေ တချို့နဲနဲပြဲတဲ့နေရာ ဒီဇိုင်းဖော်ပီးလုပ်ပေးတာတွေ (အမှန်ကဖာပေးတာ)
နားကပ်တော့ မလုပ်တတ်သေးဘူးရယ်..စမ်းကြည့်ဦးမှပဲ.. အမရေ..လက်ကောက်လေးတွေ ဆွဲကြိုးလေးတွေ လုပ်နည်းရှိလည်းပေးပါဦးနော်..
ကျနော်လဲ အချိန်အတော်များများကို အဲလိုဖြုန်းတယ်... နောက် ၂လ၃လဆို ကလေးအတွက်တွေ ရည်ရွယ်ပီးထိုးရတော့မယ်..
နားကပ်လေးတွေကြိုက်တယ်မမတန်ခူးရယ်..။ ညီမတော့ စိတ်ရှုပ်ရင်လက်သည်းအလှပြင်တယ် ဒါဆိုစိတ်အပန်းကိုပြေသွားရော ။
အပင်လေးတွေ စိုက်ဖို့တော့ အဆင်ပြေမယ် ဇာထိုးပန်းထိုး ကတော့ ကျနော်တို့နဲ့ဖြစ်မယ်မထင်း))
အမတန်ခူးက လက်မှုပညာ အတော်ရတာပဲ။
အစားအသောက်လေးတွေလဲ စားချင်စရာ ... ဖုန်းအိတ်ကလေးကလဲ ချစ်စရာ ...
ပုလဲစီ အင်္ကျီလေးကလဲ ၀တ်ချင်စရာ ... အပင်လေးတွေကလဲ မျက်စိအေးစရာ ...
လေနုအေးရဲ့ ရေးတဲ့စာလေးတွေကလဲ ... စိတ်ချမ်းသာစရာ ...
ဘယ်အရာမဆို အနုပညာဓာတ်ခံနဲ့ ဖန်တီးရင် မြင်ရသူမှာ ကြည်နူးစရာပါပဲ အမရယ် ... ။
အမရဲ့ နည်းလေးတွေက အတုယူစရာပါပဲ ... ။
မြတ်ကတော့ ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ထွက်တတ်တယ်။ အခုတော့ ကပ်နားလေးတွေ လုပ်ကြည့်ရမယ်။ မြတ်မှာလည်း နားပေါက်မရှိဘူး တန်ခူးရဲ့။ :)
မြတ်ဘလော့လေးကိုလည်း စာလာဖတ်ပေးပါဦ။ ပြီးတော့ ဝေဖန်အကြံပြုပေးပါဦးနော်။
နောက်ဆုံးတခုရွေးတယ်ဆိုတော့ကာ ကော်မန့် ပေးသူကို မှန်းလို့ ရပြီ
ကျေးဇူးပါ ညီမပုံရိပ်ရေ. စာတွေရေးပါဦး.
ညီမPifpifရေ. ဟင်းချက်တာလောက်မခက်ဘူးညီမရဲ့. သင်ရင်ခဏလေးပဲ
ညီမမြတ်နိုးရေ. အဲဒီကအေးတော့ ထိုးတာလေးတွေ ပိုအသုံးဝင်တာပေါ့နော်. Fancy လုပ်နည်းလေးတွေသင်ပေးမယ်. စိတ်ချ
ညီမဆုရေ. ခုခေတ်ကလက်သည်းအလှပြင်တာလေးတွေ အမျိုးမျိုးနော်. တချို့ များလုပ်ထားလိုက်တာ လှလွန်းလို့ အံ့ရော.
အပင်လေးတွေနဲ့ နေရတာ ငြိမ်းချမ်းတယ်မောင်မျိုးရေ
ခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူးပါညီမမေရေ. သီချင်းဆိုတာတို့ပန်းချီတို့ တော့ အတော်ညံ့တာညီမရေ
ဓာတ်ပုံလှလှလေးတွေ ထွက်အောင်ရိုက်တတ်တာလဲ အနုပညာပဲပေါ့မြတ်ရယ်. နားကပ်လေးတွေလုပ်ရတာပျော်ဖို့ ကောင်းတယ်. မြတ်ကစာရေးတော်လိုက်တာနော်